Àmụmà egbu anụ ọhịa 323 na Norway | Network Meteorology
Amụma gburu anụ ọhịa 323 na Norway
Oké ifufe, na mgbakwunye na ịbụ ihe ịtụnanya ihu igwe, nwekwara ike ịdị oke egwu ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ebe dị mma iji chebe onwe gị pụọ na àmụmà, nke bụ ihe mere na Norway. N'ebe ahụ, Hardangervidda National Park ranger hụrụ onwe ya 323 nne nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ. Ma ee e, ọ bụghị akụkọ sayensị, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ya.
O doro anya na, dị ka o kwuru, ọ bụ oge mbụ mmiri ozuzo gburu ọtụtụ anụmanụ, ya mere ọ maghị n’ezie ihe kpatara ya na etu o si mee.
Willfọdụ ga-eche na ọ bụ ọrụ nke mgbanwe ndị a na-eme na ihu igwe, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe omimi a na-edozighi. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-abụrịrị na anụ ọhịa ndị nọ n'ogige ahụ enweghị ohere ịchọ ebe obibi ma ọ bụ ebe obibi, ma n'ihi gịnị? Kedu ka esi esi kee ụzarị na n'ọsọ ọ bụla ọ na-ada na ala?
A na-emepụta ụzarị n'etiti igwe ojii na elu ụwa, ma ọ bụ n'etiti igwe ojii abụọ, n'ihi mmekọrịta dị n'etiti ihe dị mma na nke na-adịghị mma, nke pụtara karịa mita 5000 n'ogologo. N'ebe ahụ, akụ mmiri igwe ga-adaba na kristal ice na, na ịme nke a, mkpụrụ ahụ na-enweta ụgwọ dị mma yana kristal na-akwụ ụgwọ na-adịghị mma. Ya mere, kristal ndị ice, n'ịbụ ndị na-adị ọkụ karịa akụ mmiri igwe, na-adọkpụrụ ha n'elu igwe ojii na-eto eto, bụ Cumulonimbus. N'ụzọ nke a, na elu nke n'etiti 8 na 10km enwere ụgwọ dị mma, na ihe dịka 5km nke na-adịghị mma, si otú a na-ewepụta eletrik eletrik. Naanị ihe ị ga-erite bụ obere akụkụ nke sekọnd iji kụrụ ala (ma ọ bụ oké osimiri)!
Mana ọ ka agaghị ekwe omume ịmata etu àmụ̀mà pụrụ igbu ihe karịrị narị atọ, n'agbanyeghị na ụfọdụ anwaala inye nkọwa, dịka John Jensenius, nke National Oceanic na Atmospheric Institute nke United States, onye kwuru na ọ ga-abụ na àmụmà gbagburu anụmanụ na nke ahụ, dịka ha nọ n'otu ìgwè, nke dị ugbu a n'arụ na-egbu ha niile. Ka o sina dị, dị ka Kjartan Knutsen, onye ọrụ na ụlọ ọrụ Norwegian Environment Agency, Na Fraịdee, Ọgọstụ 26, 2016, nnukwu ifufe dị n’ebe ahụ, mana ha ahụtụbeghị ụdị ya.
Cheta na: Ka ị ghara imerụ uche nke onye na-agụ ya, ahọrọla ịghara itinye ihe oyiyi nke ozu reindeer. Ọ bụrụ na ha chọrọ ịhụ ibe ha, enwere ike ịme ya pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Amụma gburu anụ ọhịa 323 na Norway
NASA: Okpomoku di n’uwa n’iru n’uwa
Ajọ Ifufe Gastón na-ewusi ike na Atlantic, ọ ga-erute Spain?